Marketing amin'ny tsenan-trano henjana | Martech Zone
Marketing amin'ny tsenan-trano henjana
Alahady, Desambra 21, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mampiasa teknolojia an-tserasera a antonony satria ny varotra dia akany mitombo. Mihalehibe kokoa ny mpanjifa amin'ny fampiasana media sosialy hanampy amin'ny fanabeazana ny tenany amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana.
Miaraka amin'ny tsenan-trano eto sy amin'ny fanariam-pirenena, ara-dalàna raha samy nanomboka nampiasa Internet ny mpamatsy trano sy ny mpanjifa mitady hividy. Izaho dia nividy sy nivarotra trano roa taloha ary nahatsapa fa vao haingana fa ny mahita ny tena agents no fanapahan-kevitra tsara indrindra noraisintsika! Namonjy dolara an'arivony maro ny fianakaviako ary nanamora ny fandehanan'ny zavatra rehetra.
DoorFly dia tsena iray izay iarahan'ny mpiasan'ny trano sy tany malaza manandrana hanana fotoana hiara-hiasa amin'ireo mpividy trano. Ireo mpanjifa dia mihaona amina mpandraharaha ara-barotra voasoratra anarana mahomby izay manampy amin'ny fizotran'ny fividianana trano ary hanolotra tamberim-bidy ho azy ireo.
Tsindrio ity lahatsoratra ity raha tsy hitanao ny horonantsary ny fomba fiasan'ny DoorFly!
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny fomba namoronana ity hevitra ity tao amin'ny bilaogy DoorFly. Ny zavatra tsara momba ny DoorFly dia sady manompo ny mpividy an-trano no ilay mpandraharaha momba ny trano. Amin'ity tsena sarotra ity dia azoko antoka fa mpanelanelana afaka mampifandray azy roa no tena be mpitady!
Nihaona tamin'ny ekipan'ny DoorFly aho tato anatin'ny volana vitsivitsy ary faly ry zareo momba ny orinasa sy ny fotoana ahafahana manaparitaka ity banga amin'ny indostrian'ny trano ity! Manantena ny hahita ny fanombohan'izy ireo tanora aho!
Indianapolis dia toa tsena fanombohana tsara ho an'ny teknolojia Real Estate! Miaraka amin'ny DoorFly, misy koa:
URBaCS - URBaCS dia rindrambaiko sary miorina amin'ny tranokala izay ampiasain'ny tompon-trano hizarana ny traikefany amin'ny fananganana trano amin'ny namana sy mpianakavy.
Mifandray SMS momba ny trano sy finday - Fitaovana fitarihana mitarika fanavaozana izay mampiasa ny fandefasan-kafatra an-tsoratra sy ny isa tsy andoavambola mba hahazoana antoka fa misy hatrany ny fampahalalana an-trano ho an'ireo mpividy ho avy.
Ny orinasa tsirairay avy dia samy manolotra akany hafa ao amin'ny Real Estate fa izy rehetra kosa dia manome ny tsena vahaolana tokana izay manampy amin'ny fitaterana ny varotra an-trano!
Tags: fametrahana ny vokatra paomatakelaka facebookMbosaassmmsrafitra fitantanana media sosialyfitaovana fanaovana tariby
Fotoana hametrahana ny tarehinao
Ny resy dia tetikady marketing ilaina
Dec 22, 2008 amin'ny 10: 20 AM
Ara-drariny fotsiny - Nojereko ny Doorfly mba hahitako izay atolotray. Amin'izao fotoana izao, any Indiana, manana agents 6 manolo-tena amin'ny mpividy iray izy ireo. Ny mpividy dia te-hividy trano amin'ny $ 40,000 ary ny tolo-bidy avo indrindra dia $ 500., izay heveriko fa ny mpandraharaha mitaky fividianana avo indrindra dia vonona ny hamerina na hamerina 500 $. ny komisionan'izy ireo.
Ny olana ananako amin'ity dia ny tsy fahafantaran'ilay maso mialoha izay ho komisiona misy azy.
Fambara: Tsy napetraka ny kaomisiona ary azo ifampiraharahana foana.
Nahita trano maro an'ny banky nanolotra kaomisiona iray dolara voafaritra aho. Amin'ity tranga ity dia andao lazaina fa manolotra 3% na $ 1200.00 izy ireo. Angamba, $ 1000.00 ihany no atolotray. Na izany na tsy izany, ny Agent dia efa nanome ny antsasaky ny komisiona nataony nefa tsy fantany akory hoe ora firy no hampiasainy. Tsy mino aho fa fampiasam-bola hendry amin'ny fotoana na fahaizana matihanina.
Manome toky aho fa ny mpividy mpividy dia afaka mifampiraharaha fifanarahana tsara kokoa ho an'ny mpanjifany noho ny 500 $. miala amin'ny komisiona na 50% aza ny komisiona amin'ny $ 300,000. an-trano. Tsy resaka vola foana no resahina - fa ny serivisy sy ny fahaizana tokony antenaina.
Ohatra - inona no ifampiraharahako 3% manoloana ny vidiny fanidiana ary ampaham-bola iray amin'izany ampiasaina hividianana ny zanabola amin'ny .5%. Amin'ity trano $ 40,000 ity dia nitahiry $ 200.00 isan-taona ny mpanjifako ho tombontsoany irery.
Betsaka loatra ny ohatra momba ny fomba hiarovana sy hampiroboroboana ny mpanjifanao tombontsoa indrindra amin'ny fifanakalozana trano sy trano hiditra eto, fa misaotra anao namela ahy ny vola 2 centsako. 🙂
Dec 22, 2008 ao amin'ny 1: PM PM
Hevitra tsara, Paula!
DoorFly dia miasa tsy mivantana am-bava amin'izao fotoana izao mba hiala amin'ny tany, ny olona mahafinaritra any dia nandefa izany raha miasa mandritra ny fotoana feno - tena mahavariana izany saingy maharitra fotoana fohy vao manangana setroka betsaka.
Mpankafy goavambe aho amin'ny fandraisana mpiasa, ary toy ny fifaninanana sy safidy entin'ny tsena ity. Heveriko fa tsy ny DoorFly no mivarotra izany rehetra izany eo amin'ny lafiny tolotra - io dia ny fampifandraisana ireo mpiasa marina amin'ireo mpividy mety ho an'ny trano mety.
Heveriko fa maodely tsara izany. Manome safidy ho an'ny mpanjifa sy mpandraharaha manana mpanelanelana amin'ny serasera hifandraisana amin'ireo mpividy vaovao - zavatra zara raha misy ankehitriny!
Tratry ny fialantsasatra ary misaotra anao nanome anao!
Dec 23, 2008 amin'ny 12: 45 AM
Misaotra ny fitiavana rohy. Faly izahay momba ny taona 2009 satria nahita ireo mpanao trano izahay niditra an-tsehatra tamin'ny sehatry ny media sosialy. Mpanangana maro no manomboka mitoraka bilaogy, mibitsika ary mampiasa tranonkala toa an'i Facebook sy Flickr. Na dia mety ho kamo aza ny taona 2009 raha ny momba ny varotra an-trano vaovao no antenainay mahita ireo mpanao trano manohy manantona media vaovao.